Tips - All Things Myanmar Burmese
Page 1 of 301234567...»Last »
Interviewed with May Than Nu about Thingyan Moe Movie
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မေသန်းနု (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ) နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်အချိန်အခါ နီးလာပြီးဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း
Thai crowned world’s transsexual beauty queen
PATTAYA, Thailand (AFP) â€” Dressed inaflowing yellow gown with matching
Re-told story from survival!
ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများက ရဲဘောက်ကျကျေးရွာ (ယခင်ခမောင်းဆိပ်တောင်ရွာ)ရှိ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအား အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့မှု ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ မျက်မြင်သက်သေများ၏စကားသံများ ========================================= ဂူရဘူနီ ————- ကျွန်မနာမည်ကတော့ ဂူရဘူနီဖြစ်ပါ တယ်။ နံနက် ၈
Ye Lay – မအိပ်သေးတဲ့ကောင်မလေး
Photo credit Soe Moe Aung/AFP ပုဂံညောင်ဦးတွင် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ဘုရားစေတီပေါင်း (၁၈၅)ဆူ ပျက်စီး ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးခရိုင်၊ ညောင်ဦးမြို့တွင် (၂၄-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့ ညနေ (၁၇:၀၇) နာရီအချိန်ခန့်တွင် လှုပ်ခတ်သွားသော အင်အား ရစ်(ခ်) တာစကေး ၆.၈ အဆင့်ရှိ အင်အား ပြင်း ထန်သော မြေငလျင် ဒဏ်ကြောင့် ပုဂံ ညောင်ဦးမြို့ရှိ ဘုရားစေတီပေါင်း (၁၈၅)ဆူ ပျက်စီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြောင်း လက်ရှိ အခြေအနေအရ သိရှိရပါသည်။ Credit to ညောင်ဦး ပြန်/ဆက်
Posted in Articles, Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, Notes, Tips | No Comments »
Breaking News about Aung Thaung
သဘောထား တင်းမာသူ နိုင်ငံပိုင် စက်မှု ၁ စက်ရုံပေါင်းများစွာ ကို လက်သိပ်ထိုး အကြွေး များစွာ ဖြင့်ဖြောင် ခဲ့သူ ဒီပဲယင်းမှာ ဒေါ်အောငါဆန်းစုကြည် ကို လုပ်ကြံရာမှာဦးဆောင်ခဲ့သူ ဟု နာမည်ကြီး မီလီယံနာ ဦးအောင်သောင်း
Posted in Free Burma, Notes, shweDarling, Tips | No Comments »
Top 10 Quotes by Maya Angelou
1. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” 2. “If you have only one smile in you, give it to the people you love.” 3. “Bitterness is like cancer. It eats upon the host. But anger is like fire. It burns it all clean.” 4. “When someone […]